အသွင်ပြောင်းဆီများကို ရှောင်ရှားခြင်း - Hello Sayarwon
Trans Fat (အသွင်ပြောင်းဆီ) ဆိုတာ အဆိုးဝါးဆုံးအဆီတစ်မျိုး လို့လေ့လာတွေ့ရှိရပါတယ်။ Trans fatty acidလို့လဲ ခေါ်နိုင်ပါသေးတယ်။ အဲဒါက ကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရော(HDL)ကို နည်းစေပြီ းမကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရော(LDL)ကို သွေးထဲမှာ များလာစေပါတယ်။ HDLနည်းပြီး LDLများနေတဲ့လူဟာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ နှလုံးရောဂါကို ခံစားနိုင်ခြေ ပိုများလာပါမယ်။
၁။ Trans Fat ဆိုတာဘာလဲ။
တချို့အသားနဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ သဘာ၀ Trans Fat အနည်းငယ် ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း Trans Fatကို စက်ရုံတွေမှာ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကို ဟင်းရွက်ဆီတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ကာ အခန်းအပူချိန်တွင်တောင် အခဲအဖြစ်ရှိနေနိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ အချို့အစားအစာတွေမှာ အဲဒီအဆီတွေ သက်တမ်းကြာကြာခံအောင် အဲဒီဆီကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ အဆီတွေကို ခဏခဏပြန်လဲစရာ မလိုအောင် Trans Fatတွေကို ပြန်ကြော်ဆီအဖြစ် သုံးပါတယ်။
၂။ Trans Fat တွေကို ဘယ်မှာတွေ့နိုင်မလဲ။
က။ မုန့်ဖုတ်ရသော အစားအစာများ
ကိတ်မုန့်၊ကွတ်ကီး၊ပိုင်မုန့်နဲ့ခရက်ကာ အများစုမှာ Trans Fatတွေ ပါပါတယ်။ ခရင်တွေမှာလည်း ပါပါသေးတယ်။
အာလူး၊ပြောင်းဖူးနဲ့ချာပါတီမုန့်တွေဟာ Trans Fatတွေ တော်တော်ပါပါတယ်။ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်သည်းလည်းပဲ Trans Fatမပါမှသာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တယ်လို့ပြောနိုင်ပါမယ်။
ကြော်တယ်ဆိုကတည်းက အသွင်းပြောင်းဆီတွေထည့်ပြီး ကြော်တယ်လို့ ပြောစရာတောင် မလိုဘူးထင်ပါတယ်။
၃။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေ ကြည့်ဝယ်ပါ။
Trans Fat မပါတာတွေ ဝယ်ဖို့ ပါဝင်ပစ္စည်းကြည့်ဝယ်ခြင်းဟာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါပဲ။ အမေရိကန်မှာဆိုရင် 0.5grams အောက် Trans Fat ပါခြင်းကို Trans Fatမပါဝင်ဘူးလို့ ယူဆကြပါတယ်။ Trans Fatတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Partially Hydorgenated Vegetable Oil ပါမပါကိုလည်းစစ်ရပါမယ်။
၄။ Trans Fatစားသုံးခြင်းကို တတ်နိုင်သလောက် လျော့ချပေးပါ။
Trans Fatများ အထူးသဖြင့် ဟင်းရွက်ဆီတွေမှာပါတဲ့ စက်ရုံထုတ်အဆီမျိုးတွေဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘာအကျိုးမှမရှိပါဘူး။ Trans Fatကို တတ်နိုင်သမျှ နည်းအောင်စားဖို့ အကြံပေးထားပါတယ်။ FDAကတော့ အဒီအဆီမျိုးတွေကို အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့ကို အသိအမှတ်မပြုတော့ပါဘူး။ အစားအသောက်တွေမှာ Trans Fatတွေ ထည့်ချက်ခြင်းကို နောင်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း လုံးဝတားမြစ်ပိတ်ပင် သင့်ပါပြီ။
မိမိကျန်းမာရေးမထိခိုက်အောင် Trans Fatနဲ့ အခြားမကောင်းသောအဆီများကို သတိပြုစားသုံး သင့်ပါပြီ။ Trans Fatအစားထိုးပစ္စည်းကတော့ ပြည့်ဝဆီတွေပါ။ အဲဒါတွေကလည်း LDLကိုလက်စ်ထရောကို တက်စေပါတယ်။ ကျန်းမာတဲ့အစာစားခြင်းဆိုတာ အဆီ၃၅% အထက်ပိုမစားသင့်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ပြည့်ဝဆီ ၁၀%ကို မကျော်သင့်ပါ။
Trans fat is double trouble for your heart health. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/in-depth/trans-fat/art-20046114?pg=2 Assessed November 7, 2016
သင့်ကလေး အရေး၊အဖတ်၊အတွက်အချက် ဘယ်အချိန်မှာ သင်ကြားသင့်သလဲ
ကလေးများအတွက် နွားနို့ထက် ဖော်စပ်ထားသော နို့မှုန့်များက ဘာကြောင့် ပိုသင့်တော်ပါသလဲ
ဆွမ်းမွှေးရွက် ရဲ့ ဆေးဖက်ဝင် အစွမ်းသတ္တိတွေ
ဆွမ်းမွှေးရွက် က မုန့်လက်ဆောင်း ပြုလုပ်ရာမှာ ပါဝင်တာ အပြင် ဘယ်လိုအသုံးဝင်သလဲ ၊ ဘယ်လို ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေ ပေးနိုင်သလဲ
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, အာဟာရဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ဩဂုတ် 7, 2020 .2mins read
ကလေးလေးတွေကို နွေးနွေးထွေးထွေး ပွေ့ဖက် ပေးပါ
ချစ်ခင်ကြင်နာစွာ ပွေ့ဖက် ပေးခြင်းက ချစ်ရတဲ့ ကလေးတွေ အတွက် အကျိုးကျေးဇူးတွေ အများကြီး ရနိုင်တယ်ဆိုတာ ဖေဖေမေမေ တို့ သိထားသင့်ပါတယ်
ရင်နှစ်သည်းချာ ဖေဖေမေမေတို့ကမ္ဘာ, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဩဂုတ် 5, 2020 .2mins read
မေမေ မိခင်နို့ ဘေဘီလေး ကလေး ကလေးအာဟာရ နို့တိုက်ကျွေးခြင်း ကလေးကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး ရောဂါကာကွယ်နိုင်ခြင်း ကိုယ်အလေးချိန် နို့တိုက်မိခင်
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်း, ကလေးပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း ဇူလိုင် 22, 2020 .2mins read
အသင့်စား စားစရာ ကိုယ်အလေးချိန် အမျိုးအစား ၂ ဆီးချိုရောဂါ အင်ဆူလင် သွေးတွင်းသကြားဓာတ် junk food သရေစာ စိတ်ဖိစီးမှု
ဆီးချို သွေးချို, အမျိုးအစား (၂) ဆီးချို ဇူလိုင် 6, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 3, 2021 .3mins read
Covid ကာလမှာ ကလေးနေမကောင်း ရင် ဘယ်လိုပြုစုပေးရမလဲ
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 16, 2020 . 1 min read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 28, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဩဂုတ် 17, 2020 .2mins read